Calanka cusub ee DDSI
Calankii hore ee DDSI
ADDIS ABABA - Madaxwaynaha cusub ee sida ku meel gaar ah xilka dowlad degaanka Soomaalida Itoobiya loogu magacaabay Mustafa Maxamed Cumar ayaa si rasmi ah uu shaaciyay maanta oo Khamiis ah in la bedalay magaca iyo astaantii calanka DDSI.
Mustafa, oo xilka loo magacaabay shalay ayaa daboolka ka qaaday in magaca cusub uu yahay "Somali State" kaasoo marka la Soomaaliyeeyo uu yahay Maamulka Soomaalida, isagoo tibaaxay in calanka dib loogu soo celin doono midka Shanta xidig ay ku jirtay.
Magacaga cusub ayaa meesha ka saaray Ergaygii Itoobiya oo mudo ku larnaa ismaamulka Soomaalida oo la oran jiray "dowlad degaanka Soomaalida Itoobiya".
Sidoo kale, tani waxay ka dhigan tahay in calanka qaybta ay kaga jirta Hasha Geella ah oo u-keysiinaysa calanka midka dalka Itoobiya uu meesha ka baxayo, uuna dib ugu soo laabanayo midka Shanta Soomaaliyeed, oo ay gees kaga yaaliin midabada kala ah; Cagaar, Cadaan iyo Gaduud.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu Mustafa Maxamed Cumar si cad u sheegay inuu fasaxay in lasoo bandhigo dhaliilaha uu leeyahay maamulkiisa, islamarkaana aanu jiri doonin cid loo xirayo inuu dhaleecayeeyay nidaamkiisa ama fekerkiisa cabiray.
Madaxwaynaha cusub isagu kamid ahaa dadkii dhaliili jiray maamulkii Cabdi Illey ayaa ugu baaqay shacabka inay joojiyaan dagaalka dhexdooda, wuxuuna balanqaaday in maamulkiisa cusub uu wax badan ka qaban doono.
Talaabadaan ayaa waxaa si wayn usoo dhaweeyay shacabka degaanka, gaara ahaan kuwii ku sugnaa goobta uu hadalkaan kaga dhawaaqay Mustafa Maxamed Cumar, waxayna qayb ka tahay isbedalo waa wayn oo gobolka ka dhacaya.
Maamulkii Cabdi Maxamed Cumar [Cabdi Illey], kaasoo lagu qasbay inuu xilka baneeyo kadib cadaadis Addis Ababa ka yimid ayaa hir-geliyay magaca DDSI iyo calanka, laakiin waxaa haatan muuqata mid laga takhalusay, inkasta oo su'aalo badan ku hareeraysan yihiin.
Mas'uulkan cusub ayaa la sheegay inuu xiriir dhaw la leeyahay Ra'iisul Wasaare Abiy...